SAWIRRO: Guddiga Maaliyadda Golaha Shacabka Iyo Bankiga Aduunka Oo Ka Wada Hadlay Arrimo Muhiim Ah – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTASAWIRRO: Guddiga Maaliyadda Golaha Shacabka Iyo Bankiga Aduunka Oo Ka Wada Hadlay Arrimo Muhiim Ah
SAWIRRO: Guddiga Maaliyadda Golaha Shacabka Iyo Bankiga Aduunka Oo Ka Wada Hadlay Arrimo Muhiim Ah
November 6, 2018 Abdirahman Al-cadaala WARARKA MAANTA Comments Off on SAWIRRO: Guddiga Maaliyadda Golaha Shacabka Iyo Bankiga Aduunka Oo Ka Wada Hadlay Arrimo Muhiim Ah
Guddiga Maaliyadda iyo Bankiga aduunka ayaa ka wada hadlay hormarinta dhaqaalaha dalka iyo ka faa’iideysiga fursadaha banaan.
Guddiga maaliyadda, miisaaniyadda iyo qorsheynta ee golaha shacabka BJFS ayaa maanta la kulmay xubno ka socday Bankiga aduunka (World Bank).
Guddiga iyo World Bank ayaa ka wada hadlay xoojinta wada shaqeynta labada dhinac iyo hormarinta dhaqaalaha Soomaaliya.
Xubnihii ka socday World Bank ayaa guddiga la wadaagay warbixin ku saabsaneyd fursadaha dhaqaale ee aduunka ka jira iyo sida Soomaaliya loogu faa’iideyn karo.
Sidoo kale waxa ay soo bandhigeen barnaamijyada la xiriira hormarinta dhaqaalaha oo ay ka wadaan Soomaaliya, isbadalada dhaqaalaha ee sanadihii la soo dhaafay iyo fursadaha hada banaan.
” Soomaaliya waxa ay ku socotaa wado wanaagsan oo dhanka dhaqaalaha ah, waxa soo jeedineynaa hadaan nahay World Bank in laga faa’iideysto fursadaha banaan oo wax badan oo dadaal ah la sameeyo, anaguna mar walbo wa idiin garab taaganahay”. ayuu yiri Hugh Riddell oo ka socday Bankiga aduunka.
Guddiga maaliyadda, miisaaniyadda iyo qorsheynta ee golaha shacabka ayaa dhankooda la wadaagay shaqooyinka ay qabteen iyo howlaha uu guddigooda u xil saaran yahay.
Sidoo kale waxa ay la wadaageen waxyaabaha uu golaha shacabka u baahan yahay.
Guddoomiyaha guddiga maaliyadda, miisaaniyadda iyo qorsheynta ee golaha shacabka BJFS mudane Cali Cabdi Cismaan ayaa sheegay in Bankiga aduunka wax badan ay ka taageeri doonaan golaha shacabka.
“ Xubnaha ka socday Bankiga aduunka wax badan ayaa maanta kawada hadalnay, waxaan ka codsanay iney mar walbo noo soo gudbiyaan warbixinada muhiimka ah si aan ula jaanqaadno caalamka, dhaqaalaha dalkana uu usii hormaro, waxay noo balan qaadeen iney wax badan naga caawin doonaan”. ayuu yiri guddoomiye Cali.
Wasaarada Arimaha Gudaha oo War ka soo saartay Xiisada ka taagan KGS.
SAWIRRO: Kulan Sannadeedka Golaha Wasiirrada Oo La Soo Gebagebeeyay
705,518 total views, 2,735 views today
705,518 total views, 2,735 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
705,394 total views, 2,735 views today
705,394 total views, 2,735 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
705,424 total views, 2,735 views today
705,424 total views, 2,735 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
705,486 total views, 2,735 views today
705,486 total views, 2,735 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
705,541 total views, 2,736 views today
705,541 total views, 2,736 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]